Federal Police arrest Four senior Oromos as they left Obbo Dawud Ibsa’s residence. – Kichuu
HomeNewsAfricaFederal Police arrest Four senior Oromos as they left Obbo Dawud Ibsa’s residence.
Federal Police arrest Four senior Oromos as they left Obbo Dawud Ibsa’s residence.
(13/10/2020) Federal Police arrest Four senior Oromos as they left Obbo Dawud Ibsa’s residence.
Here below are the seniors arrested by Security forces and Federal Police this morning.
1. Alamayo Diro
2. Sorsa Dabala
3. Dirribi Demise
4. Malissee Danbooba
WALGA’II SADARKAA GOODINATTI (GODINAA BOORANA) PAARTI BILXIGINNAATIIN GEGGEEFAME.
Iddoon; Galma Walga’ii Magaala Yaaballoo.
Qindeesitoota fi Haala Mijeesitotaa Walgahii:
1. Oromiyaa irraa namoota bakka bu’an dhufan
2. Koree Qindeessituu Goodinna Boorana.
1. Miseensa PP irraa, aanaa hunda irraa namoota 3
2. Mitmiseensa fi partii Morkattuu; Aanaa hunda irraa namoota 10.
1. Karoora fi Tarsimoo Partii Badhaadhinnaa dhiyeessuu
2. Ce’umsii Itophiyaa Kun akkamiin milkawuu danda’a? Ga’een Mootummaa ykn Paartii Morkattuu maalii? Nuu hoo maaltii nurraa eegama?
3. Gaafii, Yaadaa fi Koomii Ummata Goodinna Boorana, Oromiyaa fi Itoophiyaa.
Dhimmoota Ijoo dhiyaate;
1. Seena qabsoo oromoo= Waggaa 150.
2. Qabsoo Oromoo maaltuu Milka’u dhowwaa ture.
3. Rakkoo Nageenya Oromiyaa fi Biyyattii mudacha jiru.
Gaafiwwan ijoo ka’aniifi kan deebi hin argatin
1. Daangaan Oromiyaa kibbaan bara baraan saamama jiru maaf furmaata hin arganne? Mooyalee keessa alaabaan Naannoo 2(lama) maaf dhaabbata? Akkamiin magaali tokko Mootummaa 2n bula? Qoottii Naannoo Soomalee ta dhiyeenna Camuqittii qubattee, Mootummaan argeera? Yoo argee eentuu qubsiisee? Dhimmi Kun walti bu’iinsaaf kara hinsaaqu? Mootummaan maaf calleessa filate?
2. Gootota danga irattii wareegamanii, miidhamanii fi maatii isaanitiif deegarsii godhamee ga’a dha? Deegarsummaan xiqqaan sunu maatii bira hingeenne, sababii maalii? Qarshiin eessa jira? Fuulduraaf maaltii yaadame? Oromoonu maaf akka gootattii hin fudhatini/hinfaarsini?
3. Daawwaa Zooniin eessaa hanga eessaattii?
4. Godinnii Boorana Liiban maaf hundeefamuu dadhabe? Deebiin Gaadisa Gumii Gaayo irratti Shimallis deebise uummata Boorana mufachiisera, kun maaf ta’u danda’e? Isin qaamni biyyaa bulchu wa’ee kana gaafachu dandeessu? Maaf ummata dura dhaabattu?
5. Saamicha lafa kana mootummaan maaf too’achuu dadhabe? Moo ufiiyyuu arka keessa qaba? Keessumatti magala yaaballootiif aanaa yaaballoo.
6. Dhalatootii goodinna kana maaf lafa mana jireenna argachu hindandeenne? Miindaan hoogansa garaaykn nyaata irraa hafe akkamiin yeeroo gabaabdu keessatti Miliyoona oliin mana ijaaratu?
7. Paartiin badhaadhinnaa paartii haara jettan akkamiin? Ibsaa irrattii nuu kennaa. OPDO=ODP=PP, nama tokkoo, sirnaa tokko, wanti addaa maali?
8. Iccittiin hundeessan keessan obboo Lammaa Magarsaa partii keessan keessa ba’eef maali? Hawaasaaf ifa ta’u danda’a?
9. Jijjiramii isan jettan Kun waan gufachuutti jiruu fakkaata, akka hingufannee isan yaa hubattani?
10. PP’n TPLF irraa ni goomtuu jettani yaadduu?
11. Raanchii Dambalaa Waaccuu Mootummaan arkaa keessa keeyyatee, Abbooti qabeenna muraasan walii galuun, hawaasa irratti dhiibba cima geggeessa jira jedha hawaasi naanoo suni. Mootummaan waan kana irratti maaljedha? Fuulduraaf hoo maalti yaadamee? Bineensota bosona achi keessatti dararama jiraniif hoo maaltu yaadame?
12. Sirnaa fi Tarsimoon Horsiisee bulaa maaf addattii hin qophoofne? Maaf tarsiimoo Qonnaaf bocameen horsiisee bulaan dararama?
13. Diinagdee horsiisee bulaa guddisuuf, hammayoomsuuf maaltii hojjatamaa jira? Kontorbandiin daanga irraa KM 200 ni heeyyamama, asitti hoo maaf dhorgame? Daldalii horii kaa biyyaa Keeniyaa waliin ture maaf addaan kuttame? Horsiisee bulaan horii isaa qabsiisee maaf mallaqaa liqeefachu hindandeenne? Horsiisee bulaa akka inni import fi export daldalaa keessa seenu hallii maaf hin mijjoofneef?
14. Haqqumma fi walqixxumaan (Equality and Equity) bu’uraalee misooma fi kenninsa tajaajila hiruu keesatti horsiisee bultootaaf maaf carraan addaa hin kennamneef? Waan warrii sirnaa darbe keessatti moggatti qabamee miidhameef.
15. Qaamni Nageenna maaf seermalleessumma baay’isaa? Manguddoo daa’immaan fi haadholee dhaanuu, arrabsuu, ajjeesuu fi reeffa gubuu fi kkf. akkamittii laaltani? Mana hidhaa keessa baasan bakketti ajjeessan nama gatuu fi kkf.
16. Yoo nami tokko bosonatti galee maatii isaani ijjeesuu, daraaruu fi qabeenna saamuun bu’ura seera niqaba? Qaamni waan kana gocha jiru olaa’antumma seera eega jira moo cabsa jira? Nama ganni isa 18 ol ta’e tokko yakka inni raawwateef qaamii bira/maatiin itti ni gaafatama?
17. Dargaggoonnii IMX’n jaaraman maaf pirojeektii hin arganneef abbootiin qabeenna qofti argattii?
18. Barattoota Yuuniversitii Naannoo Amaaraa baratan nageennaa isaan eeguu maaltii hojjatamee? Qaama duraan barattoota kana ijjeesee hoo tarkaanfii malti irratti fudhatamee?
19. Qarshii qawween bituufa ummata irra guurtan essaa jirtii? Bittaan Qawwee maaf harkifattee?
20. Qarshiin Mil 22 Galma abbaa Gadaa jaaruuf guuramtee essaa jirtii? Eenyuu arka jirtii? Galmiisa yoom ijaaramaa?
21. PP’n walqixxummaa partiittii nii ammantii? FKN Paartiin Morkattoota akka keessan kana hawaasa walti yaamtee mariyachiisuu ni dandettii?
22. Tplf filannoo isi waan xummuratteef filannoo dhufu keessatti nii hirmaattii? Haalaa kamiin?
23. Qarshii fi Meeshaan waraana yeeroo hunda bakka adda addaatti too’anno jala oolee jedhamee gabaafama. Qaamnii yakka kana hojjatuu beekkama? Yoo beekkame maaf hawaasaf ifa hintaane?
24. Caasaan ganda hundi maaf nama hinbaratiniif kaadiree durii qofa?
25. Jaarsaa fi jaartiin kora dhuftuu ykn yaaman maaf tama bara dargii taan qofa? Jaarsa bira hinqabnuu jechuu?
26. Paarlaama, mana maree fi caffee nami isan bakka buuftan dhugumaan ummataa bakka ni bu’a?
27. Siida Minilik masaara Mootumma keessatti dhaabuun tuffii Oromoo hin garsiisuu?
28. Ijjoolleen bara kana baracha jiran baay’een barreessuu, dubbisuu hin beekan, sababaa fi furmaati maali?
29. Qaalahiinsa jireenna hawaasa darara jiruu sirreessuuf akka mootummaattii maalti yaadame?
30. Mootummaan tikaa fi qaamota seera irraa odeefannoo fudhachu adoo danda’u, maaliif warra garaacha waa odeessuu gulaa fiigee hawaasa dararaa?
31. Fardaa Magaala yaaballoo keessa gaarii harkisuu maaf hin dhoorkamne? Murtiin Gaadisa Gumii Gaayo Magaala keessatti hojjii irraa nii oolaa?
32. Gaafii Misooma:
a. Pirojeekti Bishaan Biliqqoo
b. Ijaarsa kolejjii barsiisota
c. Hospitaala Rifeerala.
d. Ijaarsa Hospitaalota aanaalee fkn Taltallee
e. Ibsaa aanaa taltallee, Areeroo fi Dilloo
f. Ijaarsa galmaa Abbaa Gadaa Yaaballoo fi Gaayoo
g. Asphaaltii Bokkuu miyoo
h. Asphaaltii yaaballoo Areeroo
i. Asphaaltii Saabbaa Taltallee
j. Bishaan Magaala Yaaballoo fi Dubluqii
k. Dirree Xiyaara Boorana
l. Warshaa gogaa fi omishaa foon orii Boorana
m. Asphaaltii Yaaballoo Dilloo fi kkf
33. Fuulbana 30 bara 2013 booda Mootummaan seera qabeessa ta’e waan hinjirreef biyyitti eentuu gaggeessaa? PP aangoo nii qabdii? Biyyattiin rakkoo Nageenyaaf saaxilamu hindandeessuu?
34. Mootummaan Filannoo akka geggeessuu murteessee jira. Garu Miseensii Paartii Morkattuu irraa caalaan hidha jiru. Kanaafuu a. guyyaan filannoo yoomii? b. Mootummaan eennuu waliin dorgomaa? C. haala kana keessatti filannoon dimokiraatawa godhamu ni danda’a?
35. Filannoon sababa dhibee COVID-19 jecha dura siqee ture, amma koroona bade moo akkamiin eeyyamamu danda’ee? Boordiin filannoo biyyoolessaa neutral ta’e murteessuu nidanda’a?
Ethiopia: “I did not receive a summons, nor did I consult with my lawyers. Lidetu Ayalew
Haasaa jaal Marroo eebba waraana bilisummaa oromoo”WBO”